ပဲ့တင်သံတခုရဲ့ ရောင်ပြန်: February 2009
Posted by ရောင်ပြန် at 5:09 PM2ပဲ့တင်သံ
Posted by ရောင်ပြန် at 3:48 PM9ပဲ့တင်သံ
Posted by ရောင်ပြန် at 5:06 PM9ပဲ့တင်သံ
ကဲ.. ဒီတစ်ခါတော့ ပျင်းရင် ကစားနေကျ ဂိမ်းလေးတစ်ခု မျှဝေမယ်နော်..။ Super Miner လို့ခေါ်တယ်..။ မီးမီးကတော့ အလွယ်နဲ့ ရွှေတုံးဆွဲတဲ့ ဂိမ်းလို့ တစ်ခါတစ်လေ ခေါ်တယ်..။ အဟီး..။ ကိုကို မမတို့လည်း.. မြည်းစမ်းကြည့်ပေါ့..။ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်...။ ရွှေတုံးတွေရရင်လည်း ဖွက်မထားနဲ့နော်..။ တစ်ယောက် တစ်ဝက်.. အဟဲ..။ ကဲ.. ဒီအောက်က လင့်ခ် ကနေတစ်ဆင့် သွားပြီး ရွှေတုံးဆွဲရအောင်နော်.. အဟက်..။
Posted by ရောင်ပြန် at 4:52 PM2ပဲ့တင်သံ
မမ၀ါဝါက တက်ဂ်ထားတာလေ..။ ကြာလှပေါ့.. ။ ကြွားစရာမရှိတော့ စဉ်းစားနေတာနဲ့ ကြာသွားတာ.. အဟဲ..။ အကြိုက်ဆုံး ပစ္စည်းတွေက များတာကိုး။ ကြိုက်တဲ့ တိုလီမုတ်စတွေ အများကြီးပဲ။ သေးသေးလေးတွေ စုထားတာ ကြိုက်တယ်ဆိုတော့..။ ကဲ.. ကြွားပြီနော်..။
ဒါကတော့ ဒိုင်ယာရီစာအုပ်လေ...။ ဒိုင်ယာရီရေးရပျင်းပါတယ်ဆိုမှ.. လက်ဆောင်ကလည်း ဒိုင်ယာရီစာအုပ် သက်သက်ပဲ။ ကျောင်းမှာဆို ဆရာမက ဒိုင်ယာရီရေးခိုင်းတာ အရမ်းပျင်းတာပဲ.. :D။ ဒါပေမယ့် စုတာတော့ ၀ါသနာပါတယ်..။ အဟီး..။ တစ်ခါတစ်လေ မရေးရသေးပဲ ဒိတ်ကုန်ပြီး နောက် တစ်နှစ်ကူးသွားတာလည်း ရှိသေး..။
ဒါကတော့ အရုပ်လေးတွေလေ.. အိပ်မပျော်လို့ အရုပ် ဖက်အိပ်ရင် ခဏလေး အိပ်ပျော်သွားရော..။ ခုဟာက အမတွေဟာလည်း ယူရိုက်ထားတာ။ အဟီး.. ရှူးတိုးတိုး..။ သွားပြန်မပြောနဲ့နော်။ အဟဲ..။
ဒါကတော့ နားကပ်လေးတွေလေ..။ နားကပ် တွဲလောင်း တွဲလောင်းလေးတွေဆို ကပ်နားကပ် ထက် ပိုသဘောကျတယ်။ နားမှာ ၀ဲနေလို့..။
ဒါက သော့ချိတ်လေးတွေ..။ ဖုန်းချိတ်လည်းပါတယ်..။ အရမ်းကြိုက်လို့..။ တစ်ချို့ ဟာတွေက ပျက်သွားပြီ။ အရမ်းစည်းကမ်း ကောင်းတယ်နော်..။ အဟိ။
ကလစ်သေးသေးလေးတွေ နဲ့ နောက်တစ်ပုံက ဖန်စီဆွဲကြိုးလေးတွေပေါ့..။
ပိုက်ဆံအိတ်သေးသေးလေးတွေ... ဟဲ... အားလုံး သေးသေးလေးတွေကြီးပဲနော်..။ အဟဲ. ကဲ.... မမ၀ါရေ.. အကြွေး ကျေးပါပြီနော်..။ :D...။ ရှိသမျှအကုန် ထုတ်ကြွားရတာ ရှက်စရာတော့ အကောင်းသား.. အဟဲ..။
Posted by ရောင်ပြန် at 3:55 PM5ပဲ့တင်သံ
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ဆယ့်လေးဆို ဘာမှန်းမသိ...။ ကျောင်းနေတုန်းကတော့... သူတို့တွေ ပန်းတွေလဲ ကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့် အရမ်းကြီး အရေးတယူပုံစံမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ (တခြားနေရာတော့ သိဘူးနော်.. ကျမသိသ လောက်လေးနဲ့ လူတတ်ကြီး လုပ်နေတာ)။
အရွယ်ရောက်လာတော့လည်း ဖေဖော်ဝါရီဆယ့်လေး ဆိုတာ သေချာသတိမထားမိပါဘူး..။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက် ကမှ သတိထားမိတာ...။ ချစ်သူရှိလာလို့ သတိထားမိတာ မဟုတ်ပါဘူး.. အဟဲ။
ကျမလက်ခံထားတဲ့ ချစ်သူများနေ့ဆိုတာ.... အဲဒီနေ့ရောက်ရင် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ (ချစ်သူသာမက အဖေ.. အမေ.. သူငယ်ချင်း.. စသဖြင့်ပေါ့) တွေအချင်းချင်း ပန်းတွေပေးကြ ပန်းစည်းတွေပို့ကြ.. ပို့စကတ်တွေ ပို့ကြနဲ့ ပျော်စရာပါ..။
ခုတော့ ကျမ ဒီနေ့လေးကို အမှတ်တရ ရှိတတ်လာပါပြီ။ ဒီနေ့ကြောင့် ပြသနာဖြစ်ရတာကော (သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားခိုးလည်လို့ အိမ်အပြန်အဆူခံရတာ .. အဟဲ)..။ ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းတာတွေကော (အဲဒီနေ့မှာ ဆုံးသွားတဲ့သူတွေ အတွက်ပါ..)..။ အမှတ်တရ ဖြစ်စရာတွေကော.. (သွားလည်ရင်း မုန့် လုစားကြတာတွေ) အားလုံးကြောင့်ပါ..။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခုတော့ အဲဒီနေ့ရောက်ရင် ရင်ခုန်တတ်လာပြီ။ ချစ်သူစုံတွဲရှိကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် ၀မ်းသာပေးတာရော..။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားလည်ရတာကော..။ သူတို့ပေးတဲ့ လက်ဆောင်ရတာကြောင့်ရော.. အဟဲ..။ အကုန်လုံးပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူများနေ့မှာ ကိုယ်ချစ်ခင်တဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ မျက်နှာမှာ တစ်စက္ကန့် လေးပဲဖြစ်ဖြစ် အပြုံးလေးတစ်ပွင့်တော့ မြင်ချင်ပါတယ်...။
Happy Valentine Day! Cheer U all!
Posted by ရောင်ပြန် at 4:13 PM3ပဲ့တင်သံ
ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ 13 ရက်နေ့ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်.. (အဟဲ.. သိပြီးသားကို ပြန်ပြောင်းပြောဆိုခြင်းပါ)
ဒါကြောင့် ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရတဲ့.. ရင်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ်ပေါ့... တိုင်းပြည်ရဲ့ ဖခင်အတွက် ရေးစပ်ထားတဲ့ ကဗျာကို တိုင်းပြည်ရဲ့ ရတနာလေးတွေအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်နော်.... :) :D..။
ဖေဖော်ဝါရီ 13 ဟာ
Happy 94 year Birthday, General Aung San....!
Posted by ရောင်ပြန် at 11:34 AM6ပဲ့တင်သံ
Posted by ရောင်ပြန် at 9:58 AM 12 ပဲ့တင်သံ
လွန်ခဲ့တဲ့ 2008 နိုဝင်ဘာ- ဒီဇင်ဘာ (ရက်တောင် မှတ်မိတော့ဘူး ..အဟိ)
လောက်က မမ မေသူက ပထမဆုံး မေးလ် ပို့လာတယ်။ ဘာလဲလို့ ကည့်
လိုက်တော့.. အကြိုက်ဆုံး ကဗျာအတွက် တက်ဂ် ထားတယ်တဲ့... အဲဒီ
အချိန်ကနေ တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် (ရှောင်ပြေးတာတော့ ဟုတ်ရပါဘူး။)
ပို့စ်တွေမရေးဖြစ်တာ တစ်လတောင်ကျော် နှစ်လ နီးပါးတောင် ရှိသွားတယ်။
ခုမှ တက်ဂ် ရေးရလို့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ မမမေသူရှင့်... :D..။
ကျမ အကြိုက်ဆုံး ကဗျာလေးက လက်ဝဲသုန္ဒရ အမတ်ကြီးရဲ့ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်
ရပ် ခံစားမှု ကဗျာလေးပါ။ ကျမလဲ ခု မဲဇာတောင်ခြေလောက် မဟုတ်ပေ
မယ့် ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ ဝေးနေတာပါပဲ။ အချိန်မတန်သေးလို့ အိမ် မပြန်
သေးသရွေ့ကိုယ့်မွေးရပ်မြေကို လွမ်းလို့ ခံစားနေရမှာပဲလေ...။ (ခေတ်သစ်
မဲဇာမှာပေါ့နော်.... :D).. ကဲ... ဖတ်ကြည့်နော်.....။
မဲဇာတောင်ခြေ၊ စီးတွေတွေတည့်၊ မြစ်ရေ၀န်းလည်၊ မြိုင်တောဆီက၊
မိုးရှိရှိလျှင်၊ သီရိကျက်သရေ၊ တက်ဖြိုးဝေသား၊ အောင်မြေကြော့ကြော့၊
ကုန်း မော့မော့နှင့်၊ ဘိုးတော့်ကောင်းမှု၊ တည်ထားပြုသည်၊ ဇမ္ဗူ့ ဆီမီး
ခြောက်ရောင်ညီးမျှ၊ ဂူကြီးသခင်၊ ရွှေလင်းပင်နှင့်၊ ရွှေခြင်္သေ့မြွေ၊ စ၍
ရေသော်၊ ရွှေစေတီကြီး၊ အသီးသီးတည့် ပိတ်ဆီးခြယ်သန်း၊ လျှပ်
ရောင်တန်းမျှ၊ ရွှေန်းရွှေဘုံ၊ အလုံးစုံကို၊ အာရုံမျက်မြင်၊ ဖူးမြော်ချင်၍၊
သည်တွင်ရွှေမြို့ ၊ သည်သို့စေတီ၊ သည်ဆီရွှေနန်း၊ ဖြောင့်တန်းတော့
မည်၊ စိတ်ကရည်သည်။ ။ ရွှေပြည်ဌာန ဝေးသောကြောင့်..။ ။
သဲသာသောင်မြေ၊ မြစ်ကမ်းခြေလည်း၊ အကြေတပြင်၊ တိုင်အောင်ခွင်ဝယ်၊
ရေရှင်ပတ်ဝန်း၊ ပျော်ဖွယ်ထွန်းလိမ့်၊ တစ်ကျွန်းလောက်ပင်၊ ဝေးမည်ထင်ခဲ့၊
စီးသွင်ညိုရစ်၊ မဲဇာမြစ်လည်း၊ ထစ်ထစ်ထွန်းဘိ၊ ချုံအတိနှင့်၊ တောကြီး
ဆိတ်ညံ၊ ဆီးကျံကျံဝယ်၊ ဓူဝံမပေါ်၊ မမျှော်ပါရ၊ နေကိုတလည်း၊ ဘယ်ကရှေ့ 
နောက်၊ ဘယ်တောင်မြောက်ဟု၊ တွေးထောက်မမှန်၊ ဖန်ဖန်အံ့သြ၊ ကြံတိုင်း
မောစွ၊ ဘယ်တောဘယ်မြိုင်၊ မသိနိုင်ခဲ့၊ မခိုင်စိတ်ဝမ်း၊ နေ့တိုင်းလွမ်း ရှင့်၊
ကင်းစမ်းတောင်က၊ လေဦးစ၍၊ နောက်မှလေရှည်၊ အတည်တည်သည်။ ။
လေပြည်လာက အေးသောကြောင့်။ ။
ပွဲခါညောင်ရေ၊ သွန်းမြဲပေတည့်၊ ရိုသေသဒ္ဓါ၊ ထုံးစဉ်လာဖြင့်၊ မဲဇာရပ်သူ၊
တောင်းဆုယူသည်၊ ရွှေဂူတော်နှင့်၊ ရှုတိုင်းတင့်သား၊ မိုးမြင့်သီခေါင်၊
မဲဇာချောင်က၊ တတောင်လုံးမှိုင်း၊ စ၍ ဆိုင်းသော်၊ တောင်တိုင်း ယှက်၍၊
၀န်းကာဝှေ့သည်၊ တောင်ငွေ့  ဝေေ၀၊ အထွေထွေနှင့်၊ လေလည်းရောရော၊
မိုးမပါပဲ၊ သံဝါဖြောက်ဖြောက်၊ ဆီးနှင်း ပေါက်လည်း၊ မိုးလောက်ပြင်းထန်၊
သွန်းချပြန်သော်၊ နေစကြာလည်း၊ ရောင်ဝါမထွန်း၊ ချမ်းရှာလွန်း၍၊ တည့်
မွန်းချိန်နေ၊ ရောက်လွယ်စေဟု၊ စေ့ရေ လှည့်လည်၊ တ လျက်မည်
သည်။ ။ နေခြည်ဖြာမှ နွေးသောကြောင့်။ ။
Posted by ရောင်ပြန် at 9:55 AM6ပဲ့တင်သံ